Alaska Airlines dia nanakodia ny Airbus A321 manana lohahevitra San Francisco Giants
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Alaska Airlines dia nanakodia ny Airbus A321 manana lohahevitra San Francisco Giants
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Sports • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Alaska Airlines dia nanambara ny fidirana am-piandohana ho an'ireo vahiny manao fitafiana San Francisco Giants amin'ny alàlan'ny lalao posteason.
Alaska Airlines dia mpiara-miombon'antoka ofisialy amin'ny ekipa baseball San Francisco Giants.
Ity ny fiaramanidina Alaska Airlines faharoa miaraka amin'ny livery natokana ho an'ny San Francisco Giants.
Ny fiaramanidina mitondra ny isa laharana N855VA dia hisidina manerana ny tambajotran'ny Alaska Airlines ankehitriny hatramin'ny 2022.
Alaska Airlines, ilay mpiaramiombonam-panjakana ofisialin'ny San Francisco Giants, dia mitondra any amin'ny haavo vaovao ny fankalazana ny posteason miaraka amin'ny laharam-pahamehana amin'ny alalàn'ny Giants vaovao. Fotoana ara-potoana handraisan'ny Giants ny lalao playoff ho avy, nampahafantarina androany ny fiaramanidina Airbus 321 amin'ireo mpankafy niainga tany San Francisco (SFO) ho any Seattle (SEA).
“Vitsy ny zavatra manaitaitra toy ny mahita an'io goavambe goavambe be manidina manerana ny fanjakantsika mahafinaritra io rehefa miditra amin'ny lalao famaranana isika. Ny antenaiko dia ny hanomezan'ireo mpankafy Giants fomba iray hahatsapana ho anisan'ny ekipa isaky ny mandeha izy ireo, "hoy izy San Francisco GiantCEO sy filoha Larry Baer. “Fiaraha-miasa toa antsika Airline AlaskaManolotra fanohanana mitsikera ny programa momba ny fiarahamonina, ny tanora ary ny fanabeazana eo an-toerana toy ny Willie Mays Scholarship Fund ary ny Giants Community Fund, izay manampy amin'ny fanovana ny fiainan'ireo tanorantsika. ”
Ity no livery faharoa natokana ho an'ny San Francisco Giants. Ny fiaramanidina, isa laharana N855VA, dia hisidina manerana ny tamba-jotra Alaska izao hatramin'ny 2022. Ny livery vaovao manana lohahevitra Giants dia iray amin'ireo fomba maro ahafahan'ny vahiny mankalaza ny fihodinan'ny ekipa ekipa. Seranam-piaramanidina Alaska vao nanambara fa ny mpankafy mitafy ny fitafian'i Giants dia afaka miakatra mialoha ho an'ny sidina rehetra hiafaran'i San Francisco mandritra ny faharetan'ny lalao aorian'ny ekipa.
Notokanan'ny mpiasan'ny Alaska ny fiaramanidina niaraka tamin'ny fanamarinana $ 100,000 ho an'ny Willie Mays Scholarship Fund, ho fanomezam-boninahitra ny 'Say Hey Kid's 90'th fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Ny vola dia manampy amin'ny fanatanterahana ny hetahetan'ny oniversite ho an'ny tanora mainty ao San Francisco ary manome hery azy ireo hanatratra ny tanjon'izy ireo hahatratrarana fahombiazana amin'ny lisea, amin'ny oniversite sy ny sisa. Ny flyers Terminal 2 koa dia nahazo fankalazana tampoka niaraka tamin'ny fialamboly DJ teny an-toerana, loka, fanomezana ary fitsidihan'ny mascot an'ny Giants "Lou Seal" nanatevin-daharana ny fety.
"I Alaska dia mpiara-miasa mpiavonavona an'ny Giants hatramin'ny taona 2017," hoy i Natalie Bowman, talen'ny fitantanana ny fifandraisan'ny marika sy ny varotra. "Faly izahay mampiseho ny reharehan'ny Giants antsika avy any amin'ny 35,000 metatra miaraka amin'ity fiaramanidina tsy manam-paharoa ity, ary mirary soa ho an'ny ekipa ho tsara vintana satria manantena ny hanao dingana lalina any aoriana."
Ny fiaramanidina nofonosin'ny Giants ary ny diany mialoha dia anisan'ny fomba manitatra ny fisiany any Bay, foibeny fahatelo lehibe indrindra.